Ciidanka Xooga dalka oo kooxda Al-Shabaab dagaal uga saaray deegaanka. – Kismaayo24 News Agency
by admin 25th March 2020 093
Wararka laga helaayo deegaanka Daynuunay ee Gobolka Baay ayaa waxaa ay sheegayaain in maanta barqadii ay Ciidamada dowladda dagaal kula wareegeen deegaankaas, kadib markii ay Al-Shabaab saaka qabsadeen.
Rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa goobjoogayaal sheegeen in saakay ay dagaal kula wareegeen deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 25km dhinaca Bari kaga beegan Magaalada Baydhabo, iyaga oo dadka ku nool deegaankaas ka codsadey inay la Shaqeeyaan.
Hayeeshee waxaa la sheegay in Ciidanka dowladda ay weerar ku qaadeen deegaanka Deeynuunaay, isla markaana dagaal saacad badan socdey ay dib ula wareegeen.
Dagaalka ka dhacay deegaanka Daynuunay ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen illaa 6 Askari oo ka tirsan Ciidanka Dowladda, hayeeshee Ciidanka dowladda ay haatan gacanta ku haayaan deegaankaas, kadib markii Al-Shabaab laga saaray.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka Daynuunay ee Gobolka Baay ayaa waxaa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan, basle Gudaha iyo daafaha Magaalada lagu arkayo Ciidanka dowladda oo wata Gaadiidka dagaalka, kuwaas oo dhaq dhaqaqyo sameynaya.
Masuuliyiinta Maamulka Koonfur Galbeed wali wax faah faahin ah kam bixin dagaalkaas Maanta deegaanka Daynuunay ee Gobolka Baay ku dhexmaray Ciidamada Dowladda iyo Xubno ka tirsan Al-Shabaab
War Hada: Maxay tahay Sababta John kerry uu Kenya u Imaanayo Maxaase Iska quseeya Socdaalkiisa kenya iyo Doorashada Soomaliya???
Qarax ay ku dhinteen Wasiir iyo Mas’uuliyiin kale oo ka dhacay Magaalada Buuhoodle
admin 1st August 2018 1st August 2018